Kdrama ချစ်သူတွေအနေနဲ့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ မိန်းမတွေကစပြီး ဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်း (၁၆နှစ်အောက်ကြည့်ရန်မသင့်တော်ပါ) | News Bar Myanmar
Kdrama ချစ်သူတွေအနေနဲ့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ မိန်းမတွေကစပြီး ဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်း (၁၆နှစ်အောက်ကြည့်ရန်မသင့်တော်ပါ)
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း မပြောခင်မှာ review လေးအရင်‌ပြောပေးပါမယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ကားလေးပါ။ ဒီကားထဲမှာတော့ မိန်းမတွေကစပြီး ဖောက်ပြန်ကြတာပေါ့နော်။ ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေက အရမ်းသနားဖို့ကောင်းပြီး သူတို့ဘာလို့ဖောက်ပြန်ရတာဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီကားလေးက The world of married နဲ့ VIP ထက်ပိုပြီးရင်ထဲထိတယ်။
အခြားအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့မတူပဲ ခွဲထွက်နေတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ ဒီကားလေးရဲ့ ထူးခြားချက်က ကြည့်သာကြည့်လိုက်ရတယ် ဘယ်သူ့ကိုမှဒေါသမထွက်လိုက်ရဘူး၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းအပြစ်မတင်ရက်ဘူး။ Character development အရမ်းကောင်းပါတယ်။ တကယ်ခံစားတတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ရင်ထဲနင်နင့်နေအောင်ကိုခံစားရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးက ရိုးရှင်းပါ တယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်တွေရဲ့ လျစ်လျှူရှု ခြင်းခံနေရတဲ့အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုး သမီး တို့ ရဲ့ ရင်နာ စရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက အိမ်ထောင်ရေး မှာ လျစ်လျှူ ရှုခြင်းခံနေရတော့ တွေ့ဆုံတဲ့ အခိုက်မှာ မသိစိတ်ကနေ သာယာ သွားကြတာပါ။ နှစ်ယောက်လုံး က မှားမှန်းသိလို့ အကြိမ်ကြိမ် လက်တွဲဖြုတ်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးရလဒ်တွေကိုလည်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပြသထားတဲ့ ပညာပေးဇာတ်လမ်းလေးပါ။ K dramaချစ်သူ တွေအနေနဲ့ လက်မလွှတ်သင့်ဘူး လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းနာမည်ကတော့ Love Affairs in the Afternoon ဖြစ်ပါတယ်။
Son Ji Eun ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးပါ။ သူမအမျိုးသားဟာ အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မကျယ်လှတဲ့မြို့ငယ်လေးထဲမှာ တာဝန်ကျတာကြောင့် သူမလည်းအတူတူလိုက်နေပါတယ်။ သူမဟာ အနေအေးပြီး ရိုးသားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ မားကတ်ထဲမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကို ဝင်လုပ်ပါခဲ့ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် အိမ်ထောင်သက်တမ်းကြာနေတာတောင် ကလေးမရကြသေးပါဘူး။ ယောကျ်ားဖြစ်သူက သူမအပေါ် ဂရုစိုက်ခြင်းလုံးဝ မရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဇီဝဗေဒကျောင်းဆရာလေး Yoon Jung Woo နဲ့ တွေ့ပြီးနောက်မှာတောာ့ သူမဘဝဟာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ တဖက်ကဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ တဖက်ကဘဝကို သက်ဝင်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူ နှစ်ကြား ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ…?
Next MV ထဲကလို တကယ့်ဘုရင်ကြီးဖြစ်သွားရင် Jackson Wang တစ်ယောက် ဘာတွေလုပ်မှာလဲ? »
Previous « တွဲဖက်မင်းသမီး၏ အိန္ဒြေထိပါးအောင်ပြောဆိုသည်ဟု ဝေဖန်ခံနေရသော မင်းသား Park Si Hoo